दसैंमा दुई पाङ्ग्रे किन्ने कि चार ? सुनको एक्कादेखि गाडीसम्म उपहारमै « Mero LifeStyle
मेरो लाइफस्टाइल	|| 21 September, 2021
दसैं र तिहार नेपालमा मनाइने प्रमुख चाडपर्व मध्यमा पर्छ । यस पर्वका बेला घरमा नयाँ सामाग्री जोड्दा शुभ मानिने जनविश्वास छ । यही मौका छोपेर व्यवसायीहरुले ग्राहक लोभ्याउन विभिन्न आकर्षक अफरहरु ल्याउने गरेका छन् । सवारी साधन खरिदमा विभिन्न छुट, उपहार लगायतका सेवासुविधा प्रदान गर्नुका उद्देश्य ग्राहकलाई आकर्षित गर्नु हो । सोहीक्रममा यो वर्ष चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा के–कस्ता अफर छन् ? सबैको चासोको विषय हुन सक्छ ।
चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका दसैं अफर:
हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट २०७८
हुन्डाई कम्पनीले आउँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै ‘हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट २०७८’ सार्वजनिक गरेको छ । यस अफरबाट खरिदकर्ताले सवारी साधन किनेमा नगद छुट, बम्पर उपहार पाउने छन् । जसमा ३ लाख नगद फिर्ता , अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त छुट र १ वर्षसम्म सडक दस्तुर र बीमा पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी एक जनाले बम्पर उपहारमा हुन्डाईको आई २० कार पाउने छन् ।
डाट्सनको फेस्टिभ हट डिल
डाट्सन कम्पनीले चाडपर्वको अवसर पारेर ‘डाट्सन फेस्टिभ हट डिल’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्र्तगत कार खरिद गर्ने व्यक्तिहरुका लागि कम्पनीले २ लाख ४ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ बराबरको विशेष सुविधा ल्याएको छ । जसमा १ लाख २५ हजार नगद छुटको साथै कार खरिद गर्ने ग्राहकलाई २७ हजार ९ सय ९९ मूल्य पर्ने रेडमी नोट १० एस प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै १ वर्षको बीमा, सवारी कर, ३ वर्ष वारेन्टीका साथै सर्भिसिङमा छुट हुनेछ ।
निसान फेस्टिभ ड्राईभ
निसानले ‘निसान फेस्टिभ ड्राईभ’ दसैं अफर ल्याएको छ । यस अन्र्तगत ३ लाख ५२ हजार २ सय ७१ रुपैयाँ रकमको योजना छ । जसमा साढे दुई लाख नगद डिस्काउन्टका साथै १ बर्षसम्म सडक दस्तुर र बीमा छुट रहेको छ । ३ बर्षसम्म सर्भिसिङ र वारेन्टी छुट दिने समेत कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रोेटोन कम्पनीले ‘प्रोटोन दसैं–दक्षिणा, अरुले दिएपनि नदिएपनि प्रोटोनले दिन्छ दक्षिणा’ अफर ल्याएको छ । जसमा ६ लाखसम्मको अफर योजना रहेको छ । ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँ एक्सचेञ्ज बोनस, ५० हजारदेखि साढे दुई लाख नगद छुट, बीमाका साथै विभिन्न सामानको अफर ग्राहकलाई प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।
सुजुकी महोत्सव २०७८
सुजुकी कम्पनीले ‘सुजुकी महोत्सव २०७८’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले उक्त योजना अनुसार २ लाख रुपैयाँसम्म नगद छुटसँगै २० हजार रुपैयाँसम्मको लोयल्टी बोनस दिने जनाएको छ । यस्तै कम्पनीले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको एक्सचेञ्ज अफरका साथै स्क्र्याच कार्डमा ७५ हजार रुपैयाँसम्मको उपहार दिने घोषणा गरेको छ ।
टाटाको दसैं अफर
टाटा मोटर्स कम्पनीले ‘यसपालीको दसैं तिहार टाटाका सेफेस्ट कार्स हर्षमय परिवार’ अपर सार्वजनिक गरेको छ । जस अन्र्तगत २ लाख नगद छुट, आकर्षक एक्सचेञ्ज बोनस, १ वर्ष निशुल्क सडक कर र ३ वर्ष वारेन्टी दिने जनाएको छ ।
दुई पाङ्ग्रेमा यस्तो छ दसैं अफर:
यामाहाको मोटरसाइकलमा सुन उपहार
यामाहा कम्पनीले ‘रेस फर दि एस’ दसैं अफर सार्वजनिक गरेको छ । उक्त अफरमा मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले स्क्र्याच कार्ड मार्फत न्यूनतम ८ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी लक्की ड्र मार्फत हरेक हप्ता एकजना भाग्यशाली विजेताले ४ तोला सुनको एक्का तास उपहार स्वरुप पाउने कम्पनीले जनाएको छ । बम्परमा एकजना भाग्यशाली विजेताले ४ तोला तौल भएको तीनवटा एक्का तास अर्थात १२ तोला सुन उपहार पाउनेछन् ।
दसैंको बेला हिरोको मेला
हिरो मोटरसाइकल कम्पनीले ‘दसैंको बेला हिरोको मेला’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत हिरो मोटर साइकल तथा स्कुटर किन्ने ग्राहकले ६ हजार पक्का डिस्काउन्ट पाउनेछन् । यसका साथै, स्क्र्याच कार्डमार्फत १ लाखसम्म रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसैगरी बम्पर लक्की ड्र मार्फत एक जनाले १ लाख नगद रुपैयाँ पाउने जनाएको छ । साथै सबै हिरो मोटरसाइकल र स्कुटरमा शून्य ब्याजमा ५० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सुजुकीको दसैं अफर
सुजुकी मोटरसाइकल कम्पनीले दसैंलाई मध्यनजर गर्दै ‘दसैं आयो उमंग छायो क्यासब्याकको साथै बम्पर पायो’ उपहार योजना ल्याएको छ । यस अन्र्तगत मोटरसाइकल र स्कुटरको खरिदमा १० हजार रुपैयाँ पक्का क्यासब्याक पाइने छ । साथै यस अफरमा एक वर्षको रोड ट्याक्स, फाइनान्स र एक्सचेन्जको सुविधा रहेको छ ।
टीभीएसको दसैं अफर
टीभीएस कम्पनीले दसैं, तिहार र छठ पर्व लक्षित उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्र्तगत ‘टीभीएस ६ प्राइजको सरप्राइज’ नारासहितको उपहार योजना ल्याएको छ । यस कम्पनीबाट बाइक तथा स्कुटर किन्नेले ६ पटकसम्म उपहार जित्ने मौका पाउने जनाएको छ ।
होन्डा कम्पनीको दसैं अफर
दसैंलाई मध्यनजर गर्दै होन्डा कम्पनीले पनि दसैं अफर ल्याएको छ । ‘होन्डा छ साथ, बम्परमा थप १५ लाख’ योजना उपहार सार्वजनिक गरेको छ । होन्डाले सात लाख रुपैयाँको बजेटमा सात प्रदेशमा सात विजेता रहने गरी योजना ल्याएको हो । स्क्रयाच कार्ड मार्फत १ लाख सम्मको छुट, स्पेयर पार्टमा ७ वर्षको लागि ७ प्रतिशत छुट र सात वर्षसम्म ९ वटा सर्भिस कुप्पन निशुल्क दिने कम्पनीले जनाएको छ ।
बजाज मोटर्स कम्पननीले पनि दसैंलाई लक्षित गर्दै ‘बजाज खुसीको तीन डोज’ अफर ल्याएको छ । जस अन्र्तगत पहिलो डोजमा मोटरसाइकल किन्नु अघि १० हजार रुपैयाँ, दोस्रो डोज स्वरुप बाइक किन्दा १ लाख रुपैयाँ र तेस्रो खरिद सकेपछि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद बम्पर उपहार प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
#चार पांग्रे सवारी साधन
दसैं अनुभव : टीकाको दिन साह्रै रिस उठ्थ्यो « Mero LifeStyle
यस्तो छ दसैंको टीका, जमरा, दक्षिणा र आशिर्वादको महत्व « Mero LifeStyle
दसैंमा प्रतिदिन ५ हजार खसी बोका खपत « Mero LifeStyle
दशैंको मुखमा पनि भारत जानेको लर्को उस्तै « Mero LifeStyle
चाडपर्वको चहलपहलले बढ्दै कोरोना जोखिम « Mero LifeStyle
दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्योः११ काउण्टर थप « Mero LifeStyle